Qaphela uBabar Azam! | Scrolla Izindaba
Qaphela uBabar Azam!
Ama-Proteas kumele aqaphe uMohammad Babar Azam, ukaputeni we-Pakistan nongumdlali obalulekile.
Lesi yisexwayiso esivela kuFaf du Plessis nokaputeni uQuinton De Kock.
Ama-Proteas ase-Pakistan kwi-Test series yabo yokuqala kusukela ngowezi-2007 kanti umdlalo wokuqala uzoqala ngo-6: 45 ngoLwesibili ekuseni.
Umdlalo wesibili use-Rawalpindi futhi uqala mhla zizine kuNhlolanja.
UAzam ungukaputeni we-Pakistan ochungechungeni lwama-Test, kuma-ODI’s nakuma-T20.
Ulahlekelwe wuhambo lwangoLwezi ngowezi-2020, olwaluya e-New Zealand ngenxa yokwephuka kwesithupha akuthola ngesikhathi eqeqeshwa.
Enza i-Bowling njengomuntu ogqashula ngesandla sokudla futhi ebamba ngesandla sokudla, u-Azam uthole ama-run amahle ayizi-2 000 ama-Test cricket kwi-Test yakhe yama-29 ebhekene ne-England.
Ngemuva kohambo lwase-England, uMichael Vaughan wacashunwa ethi: “Impela uBabar Azam ungomunye wabadlali bama-Test abahamba phambili emhlabeni. Ngiyayithanda indlela adlala ngayo”.
Ama-Proteas, uThemba Bavuma noKagiso Rabada nabo babheke ukufeza izinhloso zabo.
UBavuma udinga angama-65 azomusa kuma-run ayizi-2 000. Uqale ukubonakala kuma-Test ngoZibandlela kowezi-2014 bedlala ne-West Indies futhi usemele ama-Proteas amahlandla angama-42 emidlalweni yama-Test. UBavuma waba ngumuntu wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ukushaya amagoli ekhulwini lweminyaka.
URabada uthathe amawikhethi ayi-197 emsebenzini wakhe we-Test, futhi udinga amawikhethi amathathu kuphela ukuze abe ngumshayi wesishiyagalombili waseNingizimu Afrika ukufinyelela kwibanga lamawikhethi angama-200.
NgoNtulikazi kowezi-2018, uRabada, oneminyaka engama-23, waba ngumphoseli omncane kunabo bonke kuma-Test ukuthatha amawikhethi ayi-150.
Wathola izindondo eziyisithupha ngalowo nyaka ku-Cricket South Africa Awards kubandakanya i-Cricketer of the Year, i-Test Cricketer kanye ne-ODI Cricketer Yonyaka.